BlackBerry Classic nge isiqeshana sokuhambisa iminwe futhi ucingo ngokomzimba izinkinobho amamenyu. Ngo Classic ihlanganisa umbukiso omkhulu nge kwekhibhodi, amandla, kanye lula navigation, kanye nesitayela ngokubabazekayo BlackBerry Bold. Used-smartphone, kodwa basesimweni seyisebenza ngokugcwele. Ivuliwe (sebenzisa noma isiphi-SIM khadi). Original ikhibhodi Russian. Isiqinisekiso InfoResheniya. It kuhlanganisa kuphela smart phone, ibhethri bese ishaja.